Samaysashada kaarka aqoonsiga | Somaliska
Ka bilaabata maalinta bari ee 1da bisha Oktoobar ayaa waxaa dhaqan galaya sharci ay soo saartay dowlada Sweden oo amraya in dadka soo galootiga ah loo sameeyo kaarka aqoonsiga ayadoon lagu xireyn in ay sugaan 6 bilood ama ay keenaan gacanyarahooda. Sharcigaan ayaa soo baxay bishii July ee sanadkaan, ayadoo dadka doonaya in ay dalbadaan kaarka aqoonsiga ay ka xareysan karaan Laanta Canshuuraha ee Sweden (Skatteverket) wixii ka bilowda bari. Aqoonsi la'aanta ayaa dhibaato wayn ku ah dadka soo galootiga qaasatan bulshada Soomaalida, ayadoo uusan qofku sameysan karin kaarka Bankiga, ama uusan sarifan karin jeega lacagta haduusan haysan kaar aqoonsi. Dowlada Sweden ayaa ka noqotay sharcigii hore ee ahaa in qofku uu sugo 6 bilood inta uusan kaar aqoonsi sameysan ka dib markii cabasho aad u badan ay ka timid, ayadoo dowlada ay amartay in qofka kaarka loogu sameeyo macluumaadka uu qortay marka uu isdhiibay.
Samaysashada kaarka aqoonsiga
Ka bilaabata maalinta bari ee 1da bisha Oktoobar ayaa waxaa dhaqan galaya sharci ay soo saartay dowlada Sweden oo amraya in dadka soo galootiga ah loo sameeyo kaarka aqoonsiga ayadoon lagu xireyn in ay sugaan 6 bilood ama ay keenaan gacanyarahooda.
Sharcigaan ayaa soo baxay bishii July ee sanadkaan, ayadoo dadka doonaya in ay dalbadaan kaarka aqoonsiga ay ka xareysan karaan Laanta Canshuuraha ee Sweden (Skatteverket) wixii ka bilowda bari.
Aqoonsi la’aanta ayaa dhibaato wayn ku ah dadka soo galootiga qaasatan bulshada Soomaalida, ayadoo uusan qofku sameysan karin kaarka Bankiga, ama uusan sarifan karin jeega lacagta haduusan haysan kaar aqoonsi.
Dowlada Sweden ayaa ka noqotay sharcigii hore ee ahaa in qofku uu sugo 6 bilood inta uusan kaar aqoonsi sameysan ka dib markii cabasho aad u badan ay ka timid, ayadoo dowlada ay amartay in qofka kaarka loogu sameeyo macluumaadka uu qortay marka uu isdhiibay.
Nolosha magaalada Katrineholm